Tag: mividy tsara indrindra | Martech Zone
Tag: mividy tsara indrindra
Alakamisy, Desambra 17, 2015 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Enina taona lasa izay, ny fanamby lehibe indrindra amin'ny varotra an-tserasera dia ny fahaizana mampifangaro, mampifanaraka ary mifehy ny fandefasan-kafatra manerana ny fantsona tsirairay. Rehefa nipoitra sy nitombo ny lazan'ny fantsom-baovao, dia nanampy andiany maro kokoa sy fipoahana bebe kokoa tamin'ny fandaharam-pamokarany ny mpivarotra. Ny valiny (izay mbola fahita matetika), dia antonta-doka maro be sy hafatra momba ny varotra nanosika ny tenda rehetra. Mitohy ny valin-kafatra - amin'ny fisakanan'ny mpanjifa fisoratana anarana sy miafina amin'ireo orinasa iasan'izy ireo
Marketing amin'ny atmosfera sy ny antony mety hiankina amin'izany
Alarobia 5, 2015 Alarobia 5, 2015 Douglas Karr
Amin'ny tranokala sy fitaovana rehetra azontsika amin'ny alàlan'ny tranonkala, maninona isika rehetra no mahita ny vidiny ambany indrindra amin'ny vokatra rehetra? Betsaka ny mpanjifa na orinasa manao an'izany fa ny ankamaroan'ny olona tsy manao izany. Nozaraiko tamin'ny Internet fa taona vitsivitsy lasa izay fa niova avy amin'ny fitondrana Fords ho Cadillac aho. Nahasosotra ahy ny mpivarotra Ford iray rehefa nampandoaviny vola kely aho hamahana olana iray amin'ny fampahatsiahivana.
Fahafantarana mahavariana momba ny fomba hanampian'ny faharanitan-tsaina mifototra amin'ny toerana amin'ny varotra fiara
Alarobia, Oktobra 15, 2014 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Taona vitsivitsy lasa izay, nanatrika fiofanana aho tamin'ny fanoloran-kevitry ny namako Doug Theis momba ny tambajotra. Doug no tambajotra tsara fantatro ka fantatro fa handoa vola ny fanatrehana… ary dia nisy tokoa. Ny zavatra nianarako dia ny olona maro no manao ny tsy mety amin'ny fametrahana lanja amin'ny fifandraisana mivantana fa tsy ny fifandraisana tsy mivantana. Ohatra, afaka nivoaka aho ary nanandrana nifanena tamin'ny orinasan-teknolojia marketing rehetra hijerena raha toa izy ireo
Mila mianatra ireo mpivarotra fahaizana lehibe indrindra
Alatsinainy Desambra 14, 2009 Sabotsy, Oktobra 20, 2018 Erik Deckers
Ny vadiko tamin'ny farany dia nanana fotoana nanoloana ny solosaina findainy 8 taona, izay nanomboka niasa bebe kokoa tahaka ny mpanodin-teny teny Brother tamin'ny faran'ny taona 80, nefa tsy dia haingana loatra. Dell io izay manana RAM 512 MB, ary kapila mafy 80 MB RAM. Somary miadana, tsy milamina izy ary nikatona teo alohany ilay vatan-kavoana. Nony farany nividy Samsung Netbook avy amin'ny Best Buy izy. Eny ary, tsy dia mendrika loatra amin'ny bilaogy izany, saingy misy